सफल व्यक्ति मात्रै होइन, आशिषित व्यक्ति बनौँ | Nepali Christians
सफल व्यक्ति मात्रै होइन, आशिषित व्यक्ति बनौँ
January 10, 2016 7:36 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
हामीले यस संसारमा जन्ममात्र पाएका नभएर त्यसको अलावा अरु थुप्रै कुराहरू पनि पाएका छौं । यहाँ सफल हुनेहरू पनि छन् र असफल हुनेहरू पनि छन् । सफल हुनेहरू आफ्नो ज्ञान र परिश्रममा घमण्ड गर्छन् भने असफल हुनेहरू ईश्वरलाई दोष दिन्छन् ।
बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा योसेफको जीवनबाट मैले थुप्रै रहस्यका कुराहरू सिक्न पाएको छु । म त्यहि सिकाइलाई यहाँहरूको बीचमा यस लेखमार्फत् प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । योसेफ १७ वर्षको हुँदा उनका दाजुहरूले मिलेर उनलाई मार्ने बिचार गरेको तर पछिबाट उनीहरूले योसेफलाई मिध्यानी व्यापारीको हातमा बेचिदिएको कुरा हामी बाइबलमा स्पष्ट देख्न सक्दछौं । ति ब्यापारीले योसेफलाई फेरी इजिप्टका अफिसर पोतिफरको हातमा बेचिदिएको कुरा पनि हामी पाउँदछौं ।
यहि घटनाबाट योसेफको जीवनको सफलताको घडी सुरु हुन्छ । यो सत्य हो कि सफलताको निम्ति मानिसले जीवनमा उतारचडावहरू सहनु नै पर्दछ । आफ्नै कारण असफल भएको भए पनि मानिसहरू असफलताको दोष परमेश्वरलाई दिन्छन् । बेचिइसकेपछिको दास जीवनमा योसेफले आफ्नो जवानीलाई वशमा राख्न नसकेको भए सायद उनको नाम बाइबलमा यति महत्वको साथ् उल्लेख हुने थिएन होला । योसेफले आफैलाई नियन्त्रण गर्न सकेका कारण परमेश्वरबाट आशिष पाएको कुरा हामी देख्न सक्दछौं ।
अर्को कुरा योसेफ जेलमा रहेका बेलामा उनलाई कैदीहरूका प्रमुख बनाइएको पाउछौं । त्यसबखत योसेफले सपनाको अर्थ खोलेर “राजाकहाँ म निर्दोष छु त्यसैले मलाई छुटकारा दिनुहोस्” भनेर राजाको नोकरसँग बिन्ति पठाएको देख्न सक्दछौं । बिन्ति लैजानेले बिन्ति बिसाउन बिर्सेको घटना पनि हामी बाइबलमा देख्न सक्दछौं । यदि बिन्ति लैजाने नोकरले योसेफको बिन्ति राजाको पाउमा चढाईदिएको भए सायद उसले उति नै बेला छुटकारा पाउने थियो होला । छुटकारा पाएपछि सम्भवतः उ कामको खोजीमा यता र उता भौतारिनेथियो ।
आफ्नो बिन्ति राजाकोमा नपुगेकोमा समेत् योसेफले कुनै प्रकारको गुनासो गर्दैन । हामी आफैलाई योसेफको ठाउँमा राखेर हेरौं, उसको ठाउँमा हामी भएको भए हामीले कति गुनासो गर्ने थियौं होला ? योसेफले ठुलो मन गरेर धैर्यधारण गरेको कुरा हामी देख्न सक्दछौं । लामो समयपछी त्यस नोकरले राजा फारोलाई “तपाईंको जेलमा सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने एउटा कैदी छ ।” भनेर भनिदियो । यसबाट हामीले सबै परिस्थितिमा धैर्यधारण गरेर परमेश्वरको समयलाई कुर्नुपर्छ भनेर सिक्न सक्दछौं ।
जब योसेफ फारो राजाको सामुन्ने उभिएर सपनाको अर्थ खोल्दछ, तब उ मिश्र देशकै उच्चस्तरको पदमा पुग्दछ । फारो राजाले केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमीभन्दा माथि हुनेछु भनेर अभूतपूर्व अधिकार योसेफको काँधमा सुम्पिन्छ । बुद्धि कमाउने कुरा र ज्ञान परमेश्वरबाट आउने कुरा हो, त्यसैले बुद्धिभन्दा ज्ञान सधैं नै ठुलो हुन्छ । योसेफ ज्ञानमा पूर्ण भएका मानिस थिए ।
अर्को कुरा हामीले सफल हुने मार्ग मात्रै नखोजेर आशिषित बन्ने मार्गको पनि खोजी गर्नुपर्दछ । योसेफ सफल हुनुका साथसाथै आफ्नो र आफ्नो जातिको लागिसमेत् आशिषित मानिस बन्न सके । परमेश्वरले हामीलाई बिभिन्न परिस्थितिबाट उठाएर सफल बनाउनुभएको भए तापनि हामीले त्यो सफलतालाई आफ्नै पोल्टामा मात्रै थोपर्छौँ, र आशिषित हुने अवसर गुमाउछौँ । हामीले योसेफबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू प्रशस्तै छन् । अनिकालको त्यो समयमा उनी लाखौँ मानिसहरूको सहारा बन्न सके, आफैलाई बेच्ने दाजुभाईहरूलाई आदर गर्न सके । यस घटनामा योसेफले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग नगरिकन धैर्यधारण गरेको देख्न सक्दछौं । तपाईं र मपनि जतिबेला जहाँ छौं, त्यहाँका मानिसहरूको निम्ति आशिषित बन्नुपर्दछ ।
अरुहरूलाई रुपैंया पैसा दिएर मात्रै आशिषित बनिने होइन, तर उदाहरणीय जीवन जिएर पनि आशिषित बन्न सकिन्छ । अरूहरूको निम्ति आशिषित बन्ने धुनमा हामीमाथि थुप्रै उतारचडाव भने आउन पनि सक्दछन् । त्यो उतारचडावको अवस्थामा पनि हामीले धैर्यधारण गर्न सक्नुपर्दछ ।
सन् २०११ ताका म अमेरिकाबाट नेपाल गएको थिएँ । मेरो गाउँ पूर्ब नेपालबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा खासै हतार नभएकाले गर्दा हवाईजहाज नचढेर रात्रि बस चढ्ने निधो गरें । लामो यात्रामा थुप्रै मानिसहरूसँग कुराकानी भयो । उनीहरूको बारेमा मैले सोधें, उनीहरूले मेरो बारेमा सोधे । म अमेरीकामा स्थायी बसोबास गरिराखेको मानिस हुँ भन्दा कतिपयलाई पत्याउन कठिन जस्तै भयो । मानिसहरूको सोचाइमा ठुलो देशमा बसेको मान्छेको जीवनशैली सबै हिसावले नै बदलिनुपर्छ, फजुल खर्च गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । यात्राको लगभग अन्तमा मैले उनीहरूलाई हामीले जोगाउन सकेको पैसा वा चिजहरूले अरुहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्दा सबैले अनौठो माने । मैले सिकेको कुरा के हो भने हामीले फजुल खर्च गरेर हिंड्दाभन्दा बचाएर अरुहरूलाई सहायता गर्दा निकै बढी आशिषित बन्न सकिन्छ ।
ख्रीष्ट जन्मोत्सव ख्रीष्टमस २०१५ को अवसरमा सम्पूर्ण बाआमा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिंदै यो सन्देश छोड्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरूसँग हामी धर्यताका साथ् लडौं, इमान्दार भएर सफलता हाँसिल गरौँ र त्यो सफलतालाई हामी अरुहरूको निम्ति आशिषको कारण बनाऔं ।
( इसाई पुस्तिका ‘सादृश्य’मा प्रकाशित )
रेभ. प्रकाश मेघी गुरुङ
हिमालयन बप्तिस चर्च
सफल व्यक्ति मात्रै होइन, आशिषित व्यक्ति बनौँ Reviewed by Admin on Jan 10 . हामीले यस संसारमा जन्ममात्र पाएका नभएर त्यसको अलावा अरु थुप्रै कुराहरू पनि पाएका छौं । यहाँ सफल हुनेहरू पनि छन् र असफल हुनेहरू पनि छन् । सफल हुनेहरू आफ्नो ज्ञान हामीले यस संसारमा जन्ममात्र पाएका नभएर त्यसको अलावा अरु थुप्रै कुराहरू पनि पाएका छौं । यहाँ सफल हुनेहरू पनि छन् र असफल हुनेहरू पनि छन् । सफल हुनेहरू आफ्नो ज्ञान Rating: 0
मदर टेरेसाका १० मननयोग्य भनाइहरू...गायक एड्रिन देवानसँगको अन्तर्वार्ता...